I-eyewash yokugeza eyinhlanganisela
Idivayisi ephezulu yokugeza iso
Isherha lesiso eliphathekayo leselula
Umhlangano we-Bohua eyewash ungumbumba wesikhathi esisodwa owenziwe ngobuso obushelelezi, ukumelana okuqinile kwengcindezi nempilo ende yokusebenza. Akukho mkhuba wokuqhuma ebusika noma umfutho ophakeme wamanzi. Ikhwalithi ephansi ihlala iba izingxenye eziphothene. Umsebenzi wenziwa uqine futhi ushiselwe kakhulu, ongagcini ngokuthinta ukubukeka kepha futhi ufushanisa impilo yenkonzo. Ezindaweni ezibandayo noma lapho umfutho wamanzi uphezulu, kulula ukudala ukwanda kwephubhu liqhume.
I-BH30-1011: Isifutho se-ABS Ephuzi
I-BH30-1018: Ishintshiwe kusuka ekuxhumekeni okuyisisekelo okuxhunywe ku-uxhumano lwe-snap